octobre 2018 - Page 2 sur 69 -
Famerenana ny hasin’ny mpanabe : Havadika volavolan-dalàna ireo sata
Isan’ny naha be olana teto Madagasikara hatramin’izay ny mahakasika ireo mpampianatra mpanabe. Izany hoe, ny zava-misy iainan’ireo mpanabe. Toa ny karama kely, karama daba ho an’ireo mpampianatra Fram, fanampiana ela be vao voaray sy ny …Tohiny
Na dia atao faralahin’olona eo amin’ny fitantanan-draharaham-pirenena aza ny kolontsaina, dia manana ny anjara birikiny amin’ny fametrahana ny mpitondra iray eo amin’ny toerany ny mpanakanto, indrindra ny sehatry ny mozika. Manana anjara toerana lehibe amin’ny …Tohiny
Tsy manana hazon-damosina. Izay no azo ilazana ny vaomiera mahaleotena mikarakara sy misahana ny fifidianana (Ceni), izay tarihin’ny filohany, Hery Rakotomanana, amin’izao fotoana izao. Efa miely ary mandeha be tokoa mantsy ny resaka fa tsy …Tohiny
Nihaona tamin’ny vahoakan’ny distrikan’i Belo sur Tsiribihina ny kandidà laharana faha-25 amin’ny biletà tokana, Marc Ravalomanana, omaly. Tamin’izany indrindra no nanambarany nanoloana ireo vahoaka tonga marobe fa hametraka sy hamerina amin’ny laoniny ny fandriam-pahalemana ny …Tohiny